Free Storage Sites - MYSTERY ZILLION
File တွေကို နေရာတကာ သယ်သွားရတဲ့ ခေတ်က ကုန်သွားပါပြီ။ အခုဆိုရင် မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ File တွေ၊ Data တွေ၊ Movie တွေ၊ MP3 တွေ အစရှိတဲ့ အမျိုးမျိုးသော file တွေကို အလွယ်တကူ Upload တင်နိုင်ပြီးတော့ အချင်းချင်းလည်း မျှဝေသုံးစွဲနိုင်စေဖို့ အခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ file hosting website တွေ အများအပြား ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါပြီ။ Data သိမ်းဆည်းမှု ပမာဏကိုလည်း အနည်းဆုံး 1GB ကနေစပြီး5GB အထိ ခွင့်ပြုလာကြပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ အဲဒီ hostin site တွေဟာ နည်းစနစ်ပိုင်းမှာ နှစ်မျိုးခွဲပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချို့သော site တွေကတော့ နည်းစနစ်နှစ်မျိုးစလုံးကို အခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။ အဲဒီ နည်းစနစ် နှစ်မျိုးကတော့ -
၁။ 1 - Click web-hosting - ဒီအမျိုးအစားကတော့ user တွေကို file တွေ upload တင်ခွင့်ပြုထားပြီး upload တင်ပြီးသား file တစ်ခုချင်းစီအတွက်လည်း URL လို့ခေါ်တဲ့ Web Address တွေကို Create လုပ်ပေးပါတယ်။ အဲဒီ URL တွေနဲ့ file တွေကို တိုက်ရိုက် download လုပ်နိုင်ပြီး file sharing လုပ်ဖို့အတွက် hotlink တစ်ခု အနေနဲ့လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ပြရရင် rapidshare.com နဲ့ megaupload.com တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကို Movie တွေ၊ Software တွေ နဲ့ Application တွေကို တိုက်ရိုက် downlaod လုပ်နိုင်တဲ့ website တွေမှာ အများဆုံးသုံးစွဲပါတယ်။
၂။ File hosting account - ဒီအမျိုးအစားကတော့ online မှာ file တွေ သိမ်းဆည်းဖို့အတွက် user တွေကိုယ်တိုင် account တစ်ခုကို create လုပ်ပြီး online hard drive တစ်ခုလိုမျိုး အသုံးချတဲ့နည်းပါ။ file တွေကို မိမိ account ယူထားတဲ့နေရာ သို့မဟုတ် website ထဲကို upload တင်နိုင်ပြီး file sharing လည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းလေးဟာ မိမိရဲ့ Private File တွေကို တစ်ခြားသူတွေဆီ သို့မဟုတ် တစ်ခြား Site တွေ၊ Blog တွေမှာ သုံးချင်တဲ့အခါ သူ့ရဲ့ URL ကို ကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချ ရတဲ့ လူဆီကို Private Link တစ်ခုအနေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး Share လုပ်ဖို့အတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။
မှတ်ချက် ။ ။ အောက်ဖော်ပြပါ Site List ထဲတွင် ငွေကြေးဖြင့်သာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် Site များ မပါဝင်ပါ။
File Hosting Site: Max. Upload Size Additional Comments
အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Site တွေကတော့ image hosting နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ websites တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
* — http://imageshack.us
* — http://www.imagecave.com
* — http://flickr.com
* — http://www.tinypic.com
* — http://www.picturepush.com
* — http://www.supload.com
* — http://www.picoodle.com
:67: အားလုံး အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ.....။ :67:
keep it up bro:6:
So nice..... THANKS A LOT...........
ကျွန်တော်ကိုတစ်ခုလောက်ကူညီပါဗျာ...ကျွန်တော် mediafire မှာ upload လုပ်ရင်ဘယ်တော့မှာအဆုံထိမရဘူးဖြစ်နေတယ်..
ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက...upload ကရပ်ရပ်သွားတယ်ဗျာ..ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်က register မလုပ်ပါဘူး...